Raadi waxa la siinayo haweeneyda marka loo eego Kirismaska ​​2020 | Ragga Stylish
Farxad, nougat iyo hadiyado. Kuwani waa qaar ka mid ah maaddooyinka ugu wakiilka badan ee Kirismaska. Dad badan, waqtiga ugu quruxda badan sanadka ayaa ku dhow in la xuso sanad walbana, iibsashada hadiyadaha ayaa aad uga horumarsan. Tiknoolajiyadda, moodada, cuntada ama quruxda ayaa kamid ah qeybaha qaata macaamiisha ugu badan ee wax iibsada.
Si kastaba ha noqotee, haddii uu jiro nooc ka mid ah geed kasta oo Kirismas ah, waa tan Udgoon haweenka. Waxay ka kooban tahay hadiyad caadi ah taasi marwalba way shaqeysaa taasna waxay noqoneysaa mid ka mid ah kuwa ugu shaqsiyan. Si tan loo sameeyo, waa inaad taqaanaa qofka oo aad ogaataa nooca cadarka uu jecel yahay iyo midka gaarka ah. Dhanka kale, waxaa kale oo jira hadiyado kale oo aan kula yaabin karno haweeneyda Kirismaska. Qodobkaan waxaan ku muujineynaa fikradaha qaar.
Waxaan fursad u leenahay inaan kala dooranno xulashooyin badan oo cadar ah oo loogu talagalay dumarka
Haddii ay jirto arrin sixir ah Kirismaska, waa sixirka markii la bixinayo hadiyadaha. Dhalanteedka ah in aan toosno subaxaas si aan u aragno waxa ay noo keeneen waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan sanadka. Inta udhaxeysa hadiyadaha kirismaska ​​ee haweenka, waxaan kaheleynaa kareemada maqaarka, mobilada, mootooyinka korontada, qadada ama cashada gaarka ah meel, ama catarkaas oo aad ujeceshahay kuna waafajinaya shakhsiyadaada.
Xaqiiqdii, dadka qaar ma yaqaaniin cadarka ay doortaan ama kuwa ugu caansan. Xilligan, suuqa waxaan dooran karnaa u dhexeeya noocyo kala duwan. Haddii ay jirto summad u gaar ah u gaar ahaanshaha aromooyinkeeda, waa Hermes. Mid ka mid ah kuwa wali dacwadda sii wadaya waa "Un Jardín Sur le Nil", oo la isku daray midabada liinta ee maqaarka dhex gala kana dhiga caraf udgoon. "Eau d'Orange Verte" sidoo kale waa a apuesta hubaal, maadaama waqtigeedii iyo macaankeediiba ay ka dhigayaan wax soo saar badan oo aad had iyo jeer jeceshahay.
Dhanka kale, xilliga qaboobaha waa waqti lagu yaqaan inay farxad yar tahay oo dharka sida caadiga ah aan dhalaalayn. Sidaa darteed, dhinacan waa in lagu horumariyaa ilaha qaarkood sida cadarka. Mid ka mid ah kuwa ugu habboon xilligan sanadka waa "Chloé Eau de Parfum" oo uu qoray Chloé. Waa cadar balan qaadaya joog maqaarka maalintii oo dhan waxaana loo isticmaali karaa labadaba inay ka shaqeeyaan maalin-maalin, si ay ugu baxaan casho ama socod.
Shirkad kale oo sidoo kale leh quruxdeeda cadarkeeda waa Armani. Baaxaddiisa "Adiga" ama "Haa" waxay sare u qaadeysaa dareenka jinsiyeed ee haweeneyda qaarkiis ku xirta maqaarkiisa qaar qoraalada udgoon taasi way ka culus tahay inay culus tahay. Shirkadaha kale ee leh cadar aad u fiican oo haween siiya Kirismaska ​​waa Dolce & Gabbana, Escada ama Yves Saint Laurent.
Hadda waa waqtigii lala yaabi lahaa udgoonka ugu fiican oo lala kulmi karo kirismas lagu calaamadeeyay aromas. Shaki la'aan, ikhtiyaarka ugu fiican ee loogu talagalay la kulmid waqti u gaar ah oo gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Raadi waxa la siinayo haweeneyda loogu talagalay Kirismaska ​​2020